Abaalmarinta Ballaad | Red Hat JBoss EAP waa finalistaha loogu talagalay Barxadda Best
Magacyada Abaalmarinta Buugga "Red Hat JBoss EAP" oo ah Finalka ugu Fiican Maqaalka 2016-2017
Waxaan udheerahay inaan la wadaago wararka Codsiga Ganacsiga Red Hat JBoss Istaraatiijiyadu waa finalistaha 2017 Cloud Awards, oo u dagaallamaya magaca "Best Platform-as-a-Service-Service / Cloud Middleware". Waxaa loo maleynayaa in ay arrintaani ka dhigtay habka go'aaminta ayna rajaynayso cadaynta guud in mustaqbalka aan fogeyn.
Dib u soo celinta wixii aan ku dhammaynay sannadkii hore, waan la yaabay intii aan imid. Kaliya lix bilood kadib, waxaanu kicinay mid ka mid ah bakhaaradeena ugu weyn ee ugu weyn ee la hagaajiyay iyada oo la imaanaayo JBoss EAP 7 sida aasaasiga ah ee codsiyada ciriiriga ah. Maanta, JBoss EAP waa ilaha ugu muhiimsan ee Java EE 7-server oo joogto ah. Waxaanu hormarinnay mashaariicda dariiqooyinka daruuriga ah - gaar ahaan Red Hat OpenShift Container Platform, taas oo ah lafteeda waa abaalmarinta 2013 Cloud Victors - inay siiso barnaamijyada barnaamijka Java oo ah meel lagu galo dariiqa diiwaangelinta xaafadda, muraayadaha mareegaha, qaybaha, iyo kan oo kaliya caarada jilbaha, iyada oo awood u siinaysa in ay sii wadaan isticmaalka iyo kordhinta waxqabadka nidaamka codsiyada hadda jira.
Iyadoo loo eegayo TechValidate oo loo magacaabo Red Hat in 2016, dhibaatooyinka ugu waawayn ee ka hor imanaya qaybaha IT-da ee maanta waxay ku darsadaan kharashka waxayna u riixaan inay hirgeliyaan aasaaska codsiga, iyo culeyska lagu xoojiyo suuq-geynta suuqa iyo macaamiishiisa. Si wax looga qabto dhibaatooyinkan, ururadu waxay abaabulayaan awooddooda si ay u gudbiyaan qaddarinta ganacsiga iyo horumarinta si ay u xayeysiiyaan wax ka sii badan mucaaradadooda iyagoo sii wanaajinaya hagaajinta iyo codsiyada u gudbaya daruuraha - qaar badanina waxay ku qulqulayaan JBoss EAP si ay u sii wadaan dadaalkan.
Shirkadda baadhista warshadaha ee IDC waxay la hadashay macaamiisha Red Hat oo isticmaalaya JBoss EAP si ay u abaabulaan una xoojiyaan dadaalkooda hagaajinta aruurinta. Macaamiishu waxay ammaaneen JBoss EAP si ay u bixiyaan qorshe dhaqaale oo hufan kuwaas oo awood u siinaya wax-qabadkooda u dejinta nidaamka iyo in ay qadariyaan miisaaniyadda iyo maalgashiga maalgashiga dhaxalka, habaynta gaarka ah. 2015 IDC waxay tixgelineysaa, oo ay soo magacawday Red Hat, waxay ogaatay in ururadani ay ku guuleysteen wax ka badan boqolkiiba saddexda 509 ee caadiga ah ee ka badan saddex sano, iyada oo la abuurayo 70 boqolkiiba codsiyo dheeraad ah sannad kasta iyada oo 35.5 boqolkiiba saacadaha naqshadeysan ee codsi kasta ayadoo la raacayo hay'adeynta JBoss EAP.
Lambarradu waa kuwo ka baxsan, waxayna wax ka qabtaan saameynta wanaagsan ee JBoss EAP ay ku yeelan karto ururada macaamiisha. Waxay ka imanaysaa kuwan oo kale, habka 100 boqolkiiba jawaabeyaasha jawaabta TechValidate ay baaraan waxay ku qanacsan yihiin JBoss EAP, waxay ka caawiyaan in ay muujiyaan horudhaca aan samaynay - iyo shaqadeena aan samaynayno si aan hore ugu sii socono - JBoss EAP. Waxaan ku faraxsanahay shaqada dadaalka ah ee aan ku soo dejinney dhibkan, iyo mar kale, waxaa loo tixgeliyaa in loo arko in loo baahan yahay.
Qaar ka mid ah Kulliyadaha Muhiimka ah ee Muhiimka ah ee Loogu Baahan Yahay Tababbarka & Shahaadada Shahaadada waa sida Follows:
Redhat JBoss Fuse Tracked Track
RedHat JBoss Development of Enterprise Development I
Horumarinta Macluumaadka RedHat JBoss
Redhat JBoss Management Administration II
Redhat JBoss Maamulka Codsiga I
Redhat JBoss A-MQ Horumarinta iyo Dejinta